महामारीको दशैं: घटेको बलि, खुम्चिएको रौनक
कोरोना संक्रमण महामारीका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिक विषय बनेकाले यस वर्ष बडादशैंका विविध विधि र परम्परा खुम्चिएका छन् भने सर्वसाधारणले पनि रौनक सीमित गरी सावधानी अपनाएर चाड मनाउनुपर्ने परिस्थिति छ।
सिन्धुपाल्चोकमा रातभरि वर्षा, बिहानै भूकम्प वर्षामा बाढीपहिरोका कारण ठूलो क्षति सहेका सिन्धुपाल्चोकबासीलाई बिहानै भूकम्पले अत्याएको छ। बिहान भूकम्प जानुअघि जिल्लाका केही स्थानमा रातभरि वर्षा भएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन हुँदै, जनप्रतिनिधि र विज्ञको चिन्ता- अधिकार झन् खुम्चिने हो कि?
संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने गृहकार्य बढाएपछि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सुझाव संकलनको तयारीमा लागेका छन्।
आफू बसेको वडामा कति संक्रमित छन् ? वडावासीले थाहा पाउने संयन्त्र नै छैन
आफू बसेको वडामा कोरोना संक्रमित कति छन्, संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा आमनागरिकको चासो छ। तर, यो सूचना उनीहरूले कतैबाट पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरूमा कोरोनाको त्रास कायमै छ।